Revolisionan’i Nepal : Fandresena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Aogositra 2017 18:39 GMT
(Marihina fa tamin'ny 26 Aprily 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Mari-pamantarana eo amin'ny tantaran'ny firenena ny Revolisiona Aprily any Nepal. Nirotsaka an-dalambe ny vahoaka mandritra ny 19 andro tany amin'ireo tanàndehibe sy tanànakely rehetra. Nikatona tanteraka ny firenena. Ary nilentika ny mpanjaka. Izany no fandresena tsy mila herisetra, mankany amin'ny demaokrasia.
Nankalaza ny fandresena mazava ny Democracy For Nepal (Demaokrasia ho an'i Nepal), kanefa azo lazaina ho valinteny amin'ny Maoista ihany koa izany: 18 Andron'ny Revolisionan'i Aprily : Fandresena, Setriny Maoista manoloana ny Fandresena Demaokratika : Tsy Mety, hoy ny Nambaran'ny Antenimieram-panorenana Tamin'ny Andro Voalohan'ny Parlemanta.
Vao haingana i Dinesh Wagle, ilay mpanorina ny United We Blog no tao an-tanàndehiben'i New York : ary tena tsy faly izy fa tsy nahatratra ny Revolisionan'i Aprily.
Toa tsapa fa fa azo atao ihany ny manangana Antenimieram-panorenana, mila miasa ny vondrom-piarahamonina Madhesi hanatrarana ny fimirandanja sambany misy ao Nepal: resaka zon'olompirenena izany. Ny Zon'ny Madhesi: Ny Fimirandanja Feno.
Mahavita zavatra tahaka ny mahazatra amin'ny fitantarana eny an-toerana sy ny fanehoan-kevitra lehibe any an-toerana ny United We Blog: Mivoady Hiaro ny Fahefan'ny Vahoaka ny Mpitondra , Tondrozotra ho an'i Nepal Vaovao , Nihemotra ny Mpanjaka , Mitodika any amin'ny SPA ny Maso Rehetra , Ny Fahefan'ny Vahoaka .